VAOVAO TSARA HO FANTATRA (29/09/11) - rov@higa
29 Septembre 2011, 23:05pm
Filoha RAVALOMANANA Marc :"Mahatsiaro voafitaka tamin'ny fanaovan-tsonia"
fiverenan’i TGV : hararaotina ny fahantran’ny Malagasy (+vidéo)
Niverina an-tanindrazana androany I TGV taorian’ny diany tany Amerika sy Eoropa ary dia niandrandra fanamabarana goavana mikasika ny fivoaran’ny tetezamita ny rehetra saingy tsy nisy izay ahitana taratatra fiovana eo amin’ny lahateny noraisiny. Nandritra ny fandraisany fitenenana no nanambarany fa dia miverina amin’ny toerany izany Madagasikara manomboka ,eto ,satria efa nahazo ny fankatoavana ny tenany amin’ny maha-filohan’ny tetezamita azy taorian’ny fanaovan-tsonia tamin’ny 17 septambra teo. Aminy izany, na dia efa nametraka ny fepetra rehetra azahoana ny fankatoavana aza izao tontolo izao dia midika fankatoavana avy hatrany ny fandraisana fitenenana teo amin’ny Firenenena mikambana.
Ampahantrain'ny FATE ny Malagasy
Izay eo ihany fa ny fananraraotana ny fahantrann’ny Malagasy mpiray tanindrazana no tena nibaribary androany nandritra ny fitsenana izany lehiben’ny mpanongam-panjakana izany. Voaporofo manko ankehitriny fa nomena vola 5000 Ariary isan’olona ireo rehetra nahafoy fotoana nitsena an’I TGV. Na dia hita aza fa olona tsy ara-dalàna sy tsy mitondra fahombiazana eo amin’ny Firenena dia ny fahantran’ny mpiray tanindrazana no atao tambin’ny famoizany ny tanindrazany. Taizan’ny FATE amin’ny vonjy tavanandro hatrany ny vahoaka Malagasy ka ny androany ihany no zary tsinjovina fa ny ampitso sy ny aorian’izay tsy misy hazavana azo antenaina. Hatreto mantsy dia tsy mbola nanambara ny fitsaharan’ny FATE I TGV fa dia avelany manjavozavo lava ny fahitan’ny vahoaka Malagasy rehetra ny tohin’ny fanaovan-tsonia.NY nahamaika azy dia ny naka tahaka ny Filoha RAVALOMANANA tamin'ny faletrahana lampihazo hotafany amin'ireo mpanara-dia azy isaky ny kihon-dalana. Lasa aloha ny dika vilana fa tsy misy intsony ny fanetren-tena.
Jao Jean Saika nosalorana «Grand croix de 2è classe» tany Antsohihy
Tsy raikitra tamin’ny ora farany ny fanolorana mari-boninahitra an’i Jao Jean omaly tany Antsohihy. Nikarakara fety be mihitsy izy handraisany ity mari-boninahitra ambony ity kanefa izao tsy raikitra izao.
Araka ny loharanom-baovao avy any an-toerana dia tonga nanotrona ity fety be ity ny minisitry ny Fanajariana ny tany Hajo Andrianainarivelo. Izy no saika hametraka ilay mari-boninahitra. Raha tsiahivina dia efa misy ny didy fampisamborana an’i Jao Jean navoakan’ny Fitsarana tamin’ny volana mey 2011. Noho ny resaka fanodinkodinana sy fanolanana zaza tsy ampy taona no anton’izany. Hatramin’izao anefa dia tsy mbola notanterahina ilay didy. Nanamafy ampahibemaso ny fisian’izany rahateo koa ny Filankevitra ambonin’ny mpitsara ny talata teo.
Nahoana no tsy tanterahina ilay didy ? Tsy mahagaga raha manomboka miaka-tsehatra ny Sendikan’ny mpitsara sy ny filankevitra ambony maneho hevitra satria hita izao fa tena atao fitaovana politika ny Fitsarana. Etsy an-daniny dia nilaza i Jao Jean omaly fa «efa nilamina ilay resaka mikasika ilay fanolanana. Efa nisy mantsy, hoy izy ny fisintonana ilay fitoriana nataon’ilay rain’ilay zaza voalaza fa voaolana. Efa nisy ihany koa ny resaka nifanaovan’io raim-pianakaviana io tamin’ny minisitry ny Fitsarana. Mikasika ilay fety indray dia nilaza izy fa fampihavanana ny zanaky ny faritra Sofia no atao. Raha mitombina ny fanenjehana ahy, hoy izy dia tsy tokony ho vory maro tahaka izao ny vahoakan’Antsohihy».
Fandrahonana etsy, fampitahorana eroa … “Voafitaka ny vahoaka”, hoy i Marc Ravalomanana
Niditra tamin’ny antso an-tariby mivantana nandritra ny hetsiky ny Rodobe tao amin’ny kianjan’ny Magro omaly ny Filoha Marc Ravalomanana nankahery ny mpitolona manoloana ny zava-misy ankehitriny.
Naheno aho fa mitebiteby fatratra ianareo, hoy izy, ary manahy be ihany amin’ny zava-misy. “Tena tany tsy misy lalàna tokoa ny firenena Malagasy ankehitriny. Tsy mendrika ny hitondra firenena ny mpanongam-panjakana izay mampitahotra sy mandrahona amin’ny fomba sy fihetsika tsy fanao. Hiteny sy hiresaka mivantana amin’ny vondrona iraisam-pirenena aho (Vondrona Eoropeanina, Vondrona Afrikanina, SADC, Firenena Mikambana) hoe amin’izao dia very fanahy mbola velona ny vahoaka Malagasy satria taorian’ny sonia ilay sori-dalana teny Ivato dia nanantena fiovana ny rehetra kanjo tsy izay no nitranga fa fandrahonana sy fampitahorana. Miantso ny SADC sy Troika aho. Nampanao sonia ny Malagasy ianareo, nanantena fiovana ny vahoaka nefa tsy izay no niseho. Tokony hieritreritra ireo miaramila sy zandary ataon’ny olona fitaovana politika ho fampijaliana ny vahoaka. Mba mieritrereta ihany ! Fa averiko, tsy mila samborina izany aho fa ho avy tsy ho ela. Aza asaina mankaty ireo fa ho izaho no ho avy”, hoy ny filoha Marc Ravalomanana.
“Mikasika ny fitsarana ireo manamboninahitra tamin’ny raharaha BANI dia mijaly ny vady aman-janak’izy ireo, fa tena tsy misy fanajana ny maha olona mihitsy. Tsy mitombina izany fitsarana hatao any Fianarantsoa izany. Efa mahafantatra izao tontolo izao fa tsy manaja ny zon’olombelona sady tsy manaja ny demokrasia io fitondrana io. Porofo izao fa tsy manaja ny teniny izy ireo. Tokony hiala haingana io fitondrana tsy ara-dalàna io. Mahatsiro ny vahoaka, anisan’izany ny tenako, fa voafitaka indray. Koa mankahery anareo aho, aza manana tebiteby na dia tsy afa-manoatra aza amin’ny fanaovana z’inona. Aza manaiky lembenana sy ampihorohoroana fa izaho koa aty hanao izay azo atao hiady mafy mihitsy amin’ny iraisam-pirenena. Tsy ho ela (anio) dia hivory indray ny Troika. Aza mandeha amin’ny fivoriana etsy sy eroa intsony aloha raha tsy mahazo baiko tsara ianareo. Mila faharetana sy fikirizana ary fiankinana amin’Andriamanitra isika”.
Politika Niseho vatana ireo parlemantera nisintaka tamin’i Yves Aimé
Taorian’ny fanambarana an-tsoratra in-droa miantoana nataony dia niseho vatana ary niatrika ny mpanao gazety tetsy Ampasamadinika, omaly, ireo parlemantera Tiako I Madagasikara, miisa 11, sy mpitarika politika nisintaka tamin’ny elatra Rakotoarison Yves Aimé.
Nitondra teny azy ireo ny depioten’Ikalamavony teo aloha, Rtoa Raharimampionona. Ity farany izay nanamafy fa tsy mbola nijoro akory ny GMMR (Groupement issu de la Mouvance Marc Ravalomanana) tarihin’i Yves Aimé dia efa nisintaka taminy izy ireo, noho izy nivaona tamin’ny foto-kevitra nijoroana ary koa ny hevitra tsy mitovy amin’ny famahana ny krizy. Nanamafy ireto parlemantera nisintaka ireto, fa anisan’ny foto-kevitra ijoroan’izy ireo ny hisian’ny tetezamita iaraha-mitantana, rafitra iaraha-manangana ary eken’ny rehetra nefa tsy mitanila. Mitaky ny hisian’ny fitoniana politika koa izy ireo, ka tafiditra amin’izany ny hamoahana ireo gadra politika rehetra sy ny fahalalahana maneho hevitra, indrindra ny fahafahan’ny sesitany politika rehetra mody malalaka an-tanindrazana ka ho afaka handray anjara amin’ny raharaha politika eto Madagasikara sy amin’ny fifidianana ho avy, izay fifidianana demokratika, mangarahara, malalaka ary eken’ny rehetra. Araka izany dia miandry ny fiverenan’ny filoha Marc Ravalomanana an-tanindrazana izy ireo sy ny handraisany anjara feno indray amin’ny politika hampandrosoana an’i Madagasikara, araka ny efa andrandrain’ny Malagasy maro. Mahakasika ny sori-dalana dia mankasitraka ny nahavitana sonia azy iny izy ireo, ary manantena ny hanarahana sy hampiharana antsakany sy andavany azy, eo ambany fiahian’ny SADC.
Fitsenana an’i Andry Rajoelina Tambazana vola hihoby azy eny Ivato
Hiverina an-tanindrazana anio ny filohan’ny FAT Andry Rajoelina, rehefa avy nitarika delegasiona nandray anjara tamin’ny fivoriambe faha-66 ny Firenena Mikambana avy eo nandefa iraka tany Bruxelles, nitalaho tamin’ny Vaomiera Eoropeanina mba hamerina ny famatsiam-bolany, izay tapaka hatramin’ny 2009 noho ny fanonganam-panjakana nitranga teto.
Mikarakara fandraisana manokana azy ireo ny mpiandry tanàna, ary dia manatobaka vola tsy hita pesimpesenina tokoa, nanakarama olona isam-pokontany, hiantohana ny fitaterana sy ny solon-tsakafo ary ny fanamiana iraisana sy ny sorabaventy fihobiana, hanamasahana izany. Fiara 300 isa any no indray hetsehina anio hitaterana olona mankeny Ivato. Ahiana hisy fiantraikany amin’ny fitaterana eto an-drenivohitra izany satria taksibe ny ankamaroan’ireo. Nafotaka koa ny fitadiavana olona teny amin’ny Fokontany. 40 isam-pokontany no notadiavina, sandaina 5000Ar isan’olona eo amin’ny ankapobeny. Netsehina ny mpiasam-panjakana, tsy ferana koa ny foloalindahy.
Hampisalorana fanamiana mitovy ny avy eny amin’ny ministera, hanao rodobe koa ireo olom-boatendry avy amin’ny Kongresy sy ny Filankevitra ambonin’ny tetezamita ary ny CENI. Inona no voan-dalana azon’i Andry Rajoelina hatolotra satria izy afaka nikabary teo anoloan’ny Firenena Mikambana ? Hatreto mantsy, tsy mbola nisy na firenena iray aza na mpamatsy vola nilaza fa hamerina ny fiaraha-miasany amin’i Madagasikara. Mbola samy miandry ny tena fampiharana ny sori-dalana voasonia iny ny rehetra. Ny zava-misy dia 12 andro aty aorian’ny nahavitana sonia ny sori-dalana isika izao, fa mbola any am-ponja ireo gadra politika, indrindra ny miaramila voakasiky ny raharaha BANI, FIGN ary toa tsy misy mpiresaka aza. Tsy mbola nisy sesitany politika tafody an-tanindrazana, mbola ny governemanta Vital no eo, tsy nisy nokitihina ny andrimpanjakana hafa toy ny Kongresy, Filankevitra ambonin’ny tetezamita, ny CENI … fa toa lany andro amin’ny fisehosehoana eto fotsiny !